By vijayafm on	 February 6, 2019 कृषि, देश, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
सविता तिवारी,गैंडाकोट ।
रोजगारीको अवसर प्राप्त मात्रामा नहुँदा अधिकांश युवाजनशक्तिहरु बेरोजगार बनेर बस्न पुगेका छन् । अर्थोपार्जन गर्ने उद्देश्यले कतीपय युवाहरु त विदेशीएका पनि छन् । तर विज्ञान संकाय पढेका ४ जना बायो टेक्नोलोजिस्ट युवायुवती मिलेर गैंडाकोट–५ मा च्याउको बीउ उत्पादन गर्ने उद्योग खोलेका छन् । नेपालमा रोजगारको सम्भावना छैन भनी विदेश जाने युवाहरुका लागि उदाहरणीय पात्र बन्न पुगेका छन् गैंडाकोट ५ का सुवम् बायोटिक नेपाल प्रा.लि. अन्तर्गत च्याउको बीउ उत्पादन गर्ने उद्योग खोलेर बसेका युवाहरु ।
करिब ६५ लाखको हारहारीमा सञ्चालित उक्त उद्योगमा ८ जना कामदारहरु रहेका छन् । धेरैजसो मेसिनहरु आफैले पनि निर्माण गरिरहेका छन् । यसले गर्दा कम लागतमै युवाहरु उद्योग सञ्चालन गर्न सफल भएका छन् । तीमध्येका बायो टेक्नोलोजिस्ट विनोद पोखरेलले काम गर्ने सिलसिलामा समाज तथा परिवारबाट धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको बताउनुभयो । उहाँ सबैलाई नेपालमै बसेर केही गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– “धेरै नै राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छाँै । यसरी अनुसन्धानकर्ताले आफै सम्भावना खाजेर आफै लगानी गरी उत्पादन गर्न पाउदा सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।”
उहाँ मात्रै हैन उक्त उद्योग सञ्चालक अर्का युवा ज्ञानुराज पाण्डे नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सामानहरु हामी विदेशबाट लाखौं अरबौंको संख्यामा भित्र्याउने गर्छौं । दिनहुँ जुन नेपाल व्यापार घाटामा गइरहेको छ । त्यसलाई केही मात्रामा भए पनि घटाउनका लागि आफै च्याउको बीउ उत्पादन गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ –“रेमिट्यान्सले मात्र देश धानेको छ र ? दिनहुँ व्यापार घाटा बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सले व्यापार घाटालाई न्युनीकरण गर्न सक्दैन । तसर्थ केही मात्रामा भएपनि व्यापार घाटा घटाऔं भन्ने उद्देश्यले हामीले व्यवसाय सुरु गरेका हौं ।”
अधिकांश नेपालीहरु रोजगारको अवसर नै छैन भनेर विदेशिने गर्छन् । सरकारको मुख ताकेर बस्नुभन्दा आफ्ना लागि आफैले रोजगारको अवसर सिर्जना गरी व्यवसायीकरणमा जाने हो भने समृद्ध नेपाल बनाउन सकिने उद्योग सञ्चालक बायो टेक्नोलोजिस्ट अस्मिता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ –“हामी यो जागिर खोज्दै किन भौँतारिरहन पर्यो जुन कुरा आफैले आफैलाई दिलाउन सकिन्छ । हामीले आपूmसँगै अरुलाई पनि जागरिको अवसर प्रदान गर्ने सोचले पनि उद्योग सञ्चालन गर्न लागेका हौं ।”
उद्योगका अर्का सञ्चालक दिनेश तिवारी भने आपूmले आर्जन गरेको ज्ञान, व्यवहारमा उतार्न सकियो भने सफलता हासिल गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । धेरैजसो युवाहरु फरक संकायको ज्ञान हासिल गर्छन् र काम भने फरक तरिकाको गर्छन् । रोजगारीको अवसर छैन भन्छन् । बरु लगानी लगाएर आपूmले आर्जन गरेको शिक्षा आफैले व्यवहारमा ल्याउने हो भने विकास आफैले गर्न सकिने उहाँको बुझाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ –“विद्यार्थीहरु ब्याचलर पास गरिसकेपछि दुबिधामा हुन्छन् । आपूmले पढाइअनुसार काम पाइन्छ वा पाइँदैन । रोजगारीकै अवसर नहुँदा शिक्षकमा म्यानेजमेन्ट पढेका छन् त बैंकमा साइन्स पढेका जुन फेला प¥र्याे त्यही काम गर्न बाध्य छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गरी आपूmले पाएको शिक्षा व्यवहारमा उतार्नका लागि उद्योग सञ्चालन गरेको हौं ।”
दिनहुँ हजारौंको संख्यामा नेपाली रोजगारीकै लागि विदेश जानी गर्छन । तर आपूmले वर्षौं खर्चिएर प्राप्त गरेको ज्ञानलाई व्यवहारमा ल्याउने हो भने नेपालमै बसेर स्वरोजगार बन्न सकिने उदाहरण यी युवाहरुले दिएका छन् । कहीं तपाईं पनि वैदेशिक रोजगारीको मोहमा त हुनुहुन्न ? यदि वैदेशिक रोजगारीका लागि सोच बनाउनुभएको छ भने अब सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।